Yintoni ekufuneka yenziwe nguMninimzi onke malunga neeNkqubo zeSiseko-iBhlog yeNdawo ethengisa izindlu nomhlaba:
Yintoni ekufuneka yenziwe nguMninimzi onke malunga neeSistic Systems
UTshazimpuzi 20, 2019 by bethany, Iimbono zizonke:
Inkqubo yokusebenza kwe-septic iphatha inkunkuma yendlu-ngokuzolileyo nangesidima. Kubaluleke kakhulu kulo naliphi na ikhaya, ukanti iyajongwa kude kube yimini Ukulungiswa kwenkqubo ye-septic Iyafuneka. Abanini bamakhaya abaninzi, ngenxa yoko, abaqinisekanga ukuba bayigcina njani isebenza kakuhle. Nazi izinto ezimbalwa ezisisiseko ekufuneka umnini-khaya azazi malunga nenkqubo yazo ye-septic:
Oko Ukubeka Ebaluleke
Ukugungxula okanye ukulahla izinto ezithile ngakwimibhobho yakho kunokonakalisa kwinkqubo yakho ye-septic. Ngelixa ezinye izinto zinokuvalwa Inkqubo yakho ye-septic ngamaxesha ahlukeneyo, iikhemikhali ezithile zinokuyisusa iibacteria elungileyo kwinkqubo yakho eyenzelwe ukubola iinyibilika. Nokuba zingakanani na iimveliso ezithiwa 'zingagungxulwa,' iingcali zicebisa ukuba zingagungqi ngaphandle kwephepha lendlu yangasese. Iidaptha ezilahlayo, iilitha zekati ezinokutsha, kunye neemveliso zococeko lwasetyhini kufuneka zilahlwe ngenye indlela. Igrisi ikwangumbandela oqhelekileyo xa kufikwa kumanzi okubhaliweyo kunye nasemva kweeplanga. Imimandla yokulahla yenkqubo yakho yokuthunga akufuneki iphinde ibe nembonakalo evuthayo, kuba oku kubonisa ukuba imikhwa yakho yokuhlamba iyonakalisa impilo yenkqubo. Iblachach kunye neefilayitha kwindawo yokuhlamba impahla inokuba yinto ebangela ingxaki.
Yazi imiqondiso elumkisayo yokusilela
Ukuchongwa ngokukhawuleza kunye nokulungiswa kwemiba, njengoko ivela, inokuphucula ubomi obude benkqubo ye-septic. Isidingo sokutshintshwa kwenkqubo ye-septic, ke, sinokuthintelwa ngokugcina iso kwizibonakaliso zesilumkiso sokungasebenzi kwenkqubo. Thatha uhambo ngaphandle rhoqo ukuze ujonge umhlaba wokuhambisa. Intsimi yokuntywila yodaka, nangona kungekho zimpawu zemvula yakutshanje, iflegi ebomvu efuna ukuba ihlolwe. Ingca eluhlaza eluhlaza ibonakala inomtsalane, kodwa ukuba ingca ngaphezulu kwenkqubo yakho ye-septic ichuma ngcono kunalo lonke i-lawn yakho iphela, inokubonisa ukuba ikhona imiba ekhoyo.
Ukulondolozwa kwenkqubo ye-septic kubandakanya ukujonga iimpawu zesilumkiso sokungaphumeleli nokulungiselela uhlolo lonyaka. Kukwabalulekile ukuba inkqubo yakho ye-septic iphungulwe rhoqo ngokwaneleyo kwaye kungekuphela xa kuvela imicimbi. Ukuphosa itanki le-septic linyathelo lokukhusela elisebenza ngokukuko kunye nobomi obude. Oku kufuneka kwenziwe rhoqo kwiminyaka emithathu ukuya kwemihlanu. Iimpawu zokuba inkqubo yakho ye-septic ifuna impompo zibandakanya iidrows ezigciniweyo eziphuma kwizandi zokugcwala.
Ubusika bunokuba Ngunobangela
Izinto zenkqubo yakho ye-septic zisemngciphekweni wokukhenkceza ebusika. Ayisiyi kuphazamisa le nkqubo kuphela, kodwa inokuthintela ukubola kwe-aerobic yesolids ziintsholongwane. Ngethamsanqa, kukho amanyathelo onokuwathatha ukukhusela lo mbandela. Ukubaleka kwamanzi kwimingxunya yakho yonke imihla ngexesha lasebusika kunokugubungela kwaye kuncede ukukhusela ukubanda. Kubalulekile ukunqanda ukucinezela umhlaba ngaphezulu kweetanki septic ngeemoto okanye ngeenyawo, njengoko umhlaba oxinzelelweyo ungasebenzi kakuhle xa kufakwa inkqubo. Isigqubuthelo sokugqobhoza okanye ukuhluma okuninzi kunokunceda ukufaka kwinkqubo yakho ubusika bonke. Ukuphatha kakuhle inkqubo yakho ye-septic ebusika, kunye nokulungisa nayiphi na imiba ngaphambi kokuba iseti ebandayo ingene, kungathintela ubunzima ekufumaneni inkqubo phantsi kweenyawo zomkhenkce.
UKUQAPHELA KOMhleli: Eli nqaku labhalwa ngu Iqela leendaba leHalstead. Bekhokelwe liqela lomyeni kunye nomfazi, uAnna kunye noCorey, iHalstead Media izisa uzinzo olusebenzayo kwimvelaphi yecandelo lendalo, ulwazi leshishini elincinci kunye ne-Fortune / Global 500 yamava kwimizi-mveliso yokwakha umhlaba, uyilo lomhlaba / ukwakha kunye nabakhi beemveliso zokwakha.
Fumanisa ukuba Yintoni Wonke Umnini-ndlu kufuneka azi malunga neeSystemic zeSystems nangaphezulu, ekhokelayo, iingcali zeshishini.
bethany Aprili 20, 2019
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuphucula iKhaya noqhotyosho Umva, Inkqubo yomnini mzi septic, Iingcebiso zomninimzi, Isikhokelo somninimzi, Abanini bamakhaya, septic, Inkqubo ye-septic, iingcebiso ngenkqubo ye-septic. Bookmark le Permalink.
Novemba 9, 2017 Isikhokelo somnini khaya xa ukhetha i-CDX Plywood yeRoof Sheathing Uninzi lwabanini bamakhaya luthatha ii-singles okanye ukufakwa njengeenxalenye eziphambili zophahla. Enye yezona zinto ziqwalaselweyo ngaphakathi ezifihlwe kude kukuophahla kophahla. Oku kungqineka kungaphantsi kophahla kubaluleke kakhulu ekusebenzeni kakuhle kunye nobomi bephahla. Ukufakwa kwephahla lophahla kukwenziwa kweeplywood okanye iiplanga ezenziwe ngamaplanga phantsi kweeshingles okanye zodonga. Zimbini iintlobo zophahla lophahla-luvulekile kwaye luvaliwe. Uhlobo lokuncoma luxhomekeka ekubeni kukho indawo […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Agasti 23, 2018 Isikhokelo kumaNcinci amaKhaya aBakhasayo Ukuba ngumthengi wokuqala okwangoku kunokuba ngamava oxinzelelo kuye nabani na okwiminyaka yama-20s, engama-30 nangaphaya. Kodwa ungoyiki, awuwedwa. Eli nqaku liza kubonelela ngoluhlu lwamanyathelo okuncedisa ukuba kubelula ukwenza ubunini basekhaya kube lula. Ke, uyenzile. Ingeniso ezinzileyo, ubudlelwane obuzinzileyo kwaye usindile kwiingxangxasi zomnini-ndawo wakho wakutshanje, abanye banokuthi bathathe uhlobo lukamama okanye utata. Yehlabathi imbatyisi yakho. Ke ngoku ukwimeko engxamisekileyo […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba, Imali yezezindlu
Agasti 28, 2018 Ungayilungiselela njani iwadi yakho xa uthengisa ngokukhawuleza ekhayeni? To sell a property quickly is no easy task, but by following a few simple tips can surely make the process simpler. One of the most often underestimated aspects of home sales is your yard and sprucing up the curb appeal can help close the deal. That's why at RealtyWW.info we've prepared a dash of tips and tricks to help you get your backyard in shape that will make any buyer go woah, Take care of the yard. One of the first things any real estate agent is going to look at when they […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
Februwari 4, 2017 Ndlwana encinci yezulu kwelakho igumbi Iinyanga ezishushu zentwasahlobo zijikeleze kwikona kwaye uya kufuna ukuphindelwa. Akukho sizathu sokujonga ngakumbi ngaphaya kwendlu yakho esemva. Ukuba ubeka nje umgudu omncinci kuyo - indawo engemva inokuguqulwa ibe yindawo yokuphumla. Kuxhomekeke kwisitayile sakho kunye nezinto ozikhethayo-inokuba yindawo enoxolo yokucamngca kunye nokuphumla okanye enye into ejolise ngakumbi ekuzonwabiseni. Ukwakha idesika yakho yangaphandle ngechibi okanye ecaleni kwendawo yomlilo yindawo entle yamaqela amancinci […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
Aprili 9, 2019 Iindlela ze-3 zokufumana isigulana sakho sangaphandle Silungele ihlobo Njengoko iintsuku ziba zisiya zisiba nde, ziba lula ngakumbi, ukuhlala ngaphandle kwepatiyo kuya kusiba ngakumbi. I-Al fresco yokutyela phantsi kweenkwenkwezi, ichitha impelaveki echibini, kwaye kumema abahlobo kunye nosapho ngaphezulu kwe-barbeque kubonakala kunomdla kakhulu kunokuhlala ngaphakathi. Yiyo loo nto kufuneka ubethe umhlaba ubaleka kwaye ulungiselele indawo yakho engasemva yeentsuku ezifudumeleyo ngokukhawuleza. Nantsi indlela: Ukucinga kwakhona ngemeko yakho yemozulu eshushu iya kukutsala kwiqula lakho langaphandle kunye nepatio rhoqo. Injalo […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
Juni 6, 2016 Indlu yangasese yakho ayisiyiDoti: izinto ezi-5 ekungafanelekanga ukuba zibaletsele Nangona izindlu zangasese kunye neekoti zokulahla inkunkuma zizixhobo zokulahla inkunkuma, indlu yangasese ayisiyindawo inkunkuma. Rhoqo, abantu batshiza izinto ezithi zibangele ii-clogs kunye nokuhamba ngasemva okubangela ukugcwala kwezindlu zangasese kunye nomonakalo kwinethiwekhi yonke yokugcwala. Ngamanye amaxesha umonakalo ubangela ukulungiswa okuphezulu kunye neprimiyamu ephezulu yeinshurensi yepropathi. Nazi ezinye izinto onokuthi uhendwe ukuba uzikhuphe, kodwa ngokuqinisekileyo akufuneki. Iinwele zabantu kunye nezilwanyana zasekhaya Ngokungafaniyo nephepha lasekhaya, iinwele azonakalisi ngokukhawuleza xa […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Septemba 10, 2018 Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zeenkonzo zokucoca isitayile rhoqo Iinkunkuma ekhayeni lakho zizinto ezibalulekileyo kwinkqubo yakho yokumitha. Ngaphandle kwenkqubo efanelekileyo yokusebenza kwamanzi, indlu yakho ayizukukhupha amanzi amdaka ngendlela ecocekileyo, ekhuselekileyo nefanelekileyo. Kungenxa yeso sizathu abanini makhaya bethatha ingqalelo yokuba neenkonzo zokucoca isitayile rhoqo njengoko oku kuyakuqinisekisa ukuba inkqubo yakho yokufaka imibhobho ikwimo efanelekileyo yokusebenza ngawo onke amaxesha. Nazi izibonelelo zokuba neenkonzo zokucoca isitayile rhoqo. Izithintelo ezinuka umphunga Amanzi ahlala enobungozi […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya